प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको यो अभिव्यक्ति सुन्दा सबै अचम्मित, आखिर कस्ले गर्यो यस्तो ? – Etajakhabar
प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको यो अभिव्यक्ति सुन्दा सबै अचम्मित, आखिर कस्ले गर्यो यस्तो ?
मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समयमै सूचना नदिएर गुमराहमा पार्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो रहस्य खोलेका हुन् । आयातित फलफूल र तरकारीको विषादी परीक्षण रोक्न भारतीय पक्षले पठाएको पत्रबारे आफुलाई जानकारी नदिइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । आफूले सो पत्र बारेमा पछिमात्र थाहा पाएको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भारतिय दुतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको पत्रबारे आफुलाई पहिला जानकारी नदिएर गुमराहमा पारीएको बताए । उनले भने, ‘मलाई पछि मात्र थाहा भयो र त्यससम्बन्धमा भारतले कूटनीतिक प्रयासहरू र विभिन्न ठाउँमा संवादहरू अघि बढाएको रहेछ । त्यो कुराबाट पनि मलाई अनभिज्ञ नै राखियो ।’
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले त्यसबारे जानकारी पाउनुपर्ने अधिकार भएपनि कर्मचारीले आफुलाई गुमराहमा राखेको ओलीको भनाई थियो । सरकारले भारतवाट आयातित तरकारी र फलफुलहरुमा भएको विषादी परिक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि भारतीय दुतावासले विषादी परिक्षण नगर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठाएपछि सरकारले सो निर्णय फिर्ता लिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सो पत्रका बारेमा आफुलाई पछि मात्र थाहा भएको दावी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतले विषादी परिक्षण नगर्न भन्दै पत्र नपठाएको दावी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सो दावी पछि सञ्चारमाध्यमहरुमा भारतीय दुतावासले लेखेको पत्र नै सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यस बारेमा आफुलाई जानकारी नभएको दावी गरेका हुन् । सो घटनामा कर्मचारी पंक्तिले भ्रममा राखेको हुनसक्ने ओलीको आशंका छ । ‘जानेर या नजानेर दुवै कारणले कर्मचारी पंक्तिबाट यस्तो भएको हुनसक्छ । र, मलाई जसले जानेर भ्रममा राख्यो वा अन्जानमा बताउन भुल्यो, जेसुकै होस् मसँग त्यो कुरा आएन र मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यो जानकारी पाउनुपर्थ्यो ।’
Posted on: Thursday, July 11, 2019 Time: 10:34:07